ပင်မစာမျက်နှာ » နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း » ဆွီဒင်ခရီးသွားသတင်း » နှစ်သစ်သို့ဆွီဒင်သို့အလည်အပတ်ရောက်ရှိခြင်း - စတော့ဟုမ်း၊ ဂေါ့ဘာ့ဂ်၊ Umea သို့မဟုတ် Uppsala?
နှစ်သစ်သို့ဆွီဒင်သို့အလည်အပတ်ရောက်ရှိခြင်း - စတော့ဟုမ်း၊ ဂေါ့ဘာ့ဂ်၊ Umea သို့မဟုတ် Uppsala?
ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2017
နှစ်သစ်ကူးအတွက်ဆွီဒင်နိုင်ငံသို့ခရီးသွားခြင်းဆိုသည်မှာတစ်ခုမှာမီးရှူးမီးပန်းများဖြစ်သည်။ မီးရှူးမီးပန်းဆိုသည်မှာခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားသောစီးပွားရေးဖြစ်သည်။ Stockholm နှင့် Gothenburg မှUmeå, Uppsala နှင့်အခြားဒေသများအထိသူတို့ကိုဒေသတစ်လွှားကြည့်ရှုရန်ဒေသန္တရသတင်း Newspapre ၏အကြံပြုချက်များကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
စတော့ဟုမ်းရှိတောင်တန်းများနှင့်ကျွန်းများပေါများခြင်းကြောင့်မြို့လယ်ခေါင်၌ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကိုကြည့်ရှုရန်အထူးကောင်းမွန်သောနေရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ Södermalmတွင် Slussen မှကုန်းတက်သည့်ချောက်ကမ်းပါးများသည်ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Hornsgatan တလျှောက်အနောက်ဘက်သို့SöderMälarstrandနောက်ကွယ်ရှိတောင်ကုန်းများ - အထူးသဖြင့် Skinnarviksberget - အထူးသဖြင့် Skinnarviksberget - သည်မြို့တော်ခန်းမအပါအ ၀ င် Kungsholmen အပေါ်ကြီးမားသောအမြင်များကိုမြင်နိုင်သည်။
သို့မဟုတ်, ဆန့်ကျင်ဘက်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် Norr Mälarstrandသို့ရေကိုဖြတ်ပြီးSödermalmအထက်မိုsky်းကောင်းကင်သို့ရွက်လွှင့်မီးရှူးမီးပန်းများကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်လော ကမ္ဘာနှစ်ခုလုံး၏အကောင်းဆုံးအရာများကိုကျွန်းနှစ်ခုကြားရှိVästerbronအကြားရှိတံတားပေါ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလုပ်များနေပြီးကောင်းသောနေရာကိုသေချာစေရန်စောစောရောက်ရန်ကြိုးစားပါ။
မြို့၏အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင်ÖstermalmရှိStrandvägenသည်ရေနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောမီးရှူးမီးပန်းများကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်လျောက်ပတ်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနီးအနားရှိအရက်ဆိုင်များကကြိုတင် တွေ့ဆုံ၍ နွေးထွေးသောနေရာများရှိသည်။
မြို့ပြအတွေ့အကြုံနည်းသော Skansen သည် (၃၁) ခုနှောင်းပိုင်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသဖြင့်ပျော်ရွင်သူများသည်Södermalm, Gamla Stan နှင့်Östermalmတို့ကိုတောင်ကုန်းများမှခေါ်ယူနိုင်ပြီးတစ်ခုတည်းသောအသိပေးချက်မှာအရွယ်ရောက်သူများအတွက် ၁၂၀ kronor ၀ င်ခွင့်အခကြေးငွေဖြစ်သည်။ စောစောအဲဒီမှာရ)
နှစ်သစ်ကူးအကြိုတွင်စတော့ဟုမ်းတွင်မီးရှူးမီးပန်းများ ဓာတ်ပုံ။ Hasse Holmberg / TT
Central Götaplatsenရင်ပြင်သည်ဒေသခံများကြားတွင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ Avenyn ရှိအလုပ်များသောအရက်ဆိုင်များအကြောင်းဖော်ပြရန်မလိုဘဲမီးခိုးများနှင့်နောက်ဆက်တွဲမီးပုံးပျံများသည်ဒေသခံများကြားတွင်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ပြည့်ဝမည်ဟုအာမခံချက်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ပို၍ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာGöteborgs Posten ၏Götaälvရေကမ်းနားတွင်နှစ်သစ်ကူးမီးရှူးမီးပန်းများကဖော်ပြသောသတင်းစာဖြစ်သည်။ အနီးအနားရှိGötaälvbronသည်၎င်းကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးစုံလင်သောနေရာတစ်ခုနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Masthuggsberget ကဲ့သို့သောအခြားအမြင့်ဆုံးနေရာများသည်ကြည်လင်သောညတစ်ညဖြစ်ပါကလည်းအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာကတော့Malmö Opera အပြင်ဘက်ရှိရင်ပြင်မှာအလင်းရောင်၊ ပြဇာတ်ရုံဖျော်ဖြေမှုနှင့်မီးရှူးမီးပန်းများနောက်မှလိုက်ပါမည့်ကြီးမားသောနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲဖြစ်လိမ့်မည်။
Mölevångstorgetသည်ငယ်ရွယ်သောလူငယ်များအတွက်မီးရှူးမီးပန်းများကိုကြည့်ရှုရန်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကလေးများရှိပါက ပို၍ သာယာသည့်နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်Västra hamnen ခရိုင်သည်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ကိုက်ညီပြီးနှစ်နိုင်ငံကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှစ်သစ်ကူးကြည့်ရှုခြင်း၏အသစ်အဆန်းကိုတွေ့လိုလျှင်Öresundတံတားနှင့်ကိုပင်ဟေဂင်တို့အားကောင်းမွန်သောအမြင်ရှိသည်။
မြို့ငယ်လေးတွင်အလုပ်အများဆုံးအမြင့်ဆုံးနေရာမှာ Uppsala Slott ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိတောင်ကုန်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စင်တာနှင့်ဆင်ခြေဖုံးများကိုကြည့်ရှုသည်။ အိမ်တွင်းအမှုအရာများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ပျော်ရွှင်ပါသလား။ ၁၁ ထပ်ရှိ Elite Hotel Academia's စားသောက်ဆိုင်သည်စားပွဲတစ်လုံးရနိုင်လျှင်အလွန်ကောင်းသည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Umeåမြူနီစီပယ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်လေဆာရောင်ခြည်သုံးပစ္စည်းများအားမီးရှူးမီးပန်းများချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤသည်မှာ Skeppsbron ရှိသူတို့၏တရားဝင်မီးရှူးမီးပန်းများကိုကြည့်ရှုရန်အနာဂတ်အတွက်အနာဂတ်ဖြစ်သည်။ အမှုအရာ 2018pm မှာစတင်။ လေဆာပြသမှု ဦး စားပေး? Lidköpingနှင့် Boden နှစ်မျိုးလုံးသည်ယခုနှစ်သူတို့၏မီးရှူးမီးပန်းများကိုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဖျက်သိမ်းနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ နှစ်သစ်ကူးလေဆာရောင်ခြည်သည်မည်သည့်အရာကိုမြင်လိုပါသနည်းဟုထိုမြို့များသို့သွားပါ။
ပိုမိုများပြားသောအစီအစဉ်များပြုလုပ်နေခြင်းရှိမရှိကိုသိရှိရန်ဒေသခံစည်ပင်သာယာ၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ Gott nytt år!